Tsipy kanetibe – «Mondial 2017» : mitaky ny volany amin’ny federasiona malagasy i Claude Azema | NewsMada
Tsipy kanetibe – «Mondial 2017» : mitaky ny volany amin’ny federasiona malagasy i Claude Azema
Nanao ampamoaka ny zavatra tsy nety nataon’ny delegasiona malagasy, niatrika ny “Mondial 2017”, taranja tsipy kanetibe, tany Sina, i Claude Azema, filohan’ny federasiona iraisam-pirenen’ny tsipy kanetibe.
Fivadiham-pitokisana sy tsy firaharahana. Izay ny votoatin’ny taratasy nalefan’i Claude Azema mahakasika ny fivahinian’ny ekipam-pirenena malagasy niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, sokajy “junior” sy vehivavy, tany Sina farany teo. Nambarany tao anatin’izany fa natoky tanteraka ny federasiona malagasy ny tenany, taorian’ny taratasy nifanoratan’ny roa tonta, ny 9 sy 11 novambra lasa teo, ka nanekeny handoa ny trosabe, mba tsy hitazonan’ny fitondrana sinoa ny delegasiona malagasy. Ankoatra izay, mbola nanampy andro iray fanampiny, tamin’ny fivahiniana, tany Shanghai, ny tale teknika nasionaly. “Hatramin’izao (alahady), tsy nitana ny teny nomeny ny federasiona malagasy, satria tsy mbola misy vola tonga ao amin’ny kaontiko. Araka izany, handray fepetra mifanaraka amin’izany ny federasiona iraisam-pirenena”, hoy i Claude Azema. Tsy nambarany kosa ny totalin’io trosabe tokony hefainy io.
Raha tsy mandoa io vola io ny federasiona malagasy (FMP), mety hoesorina amin’i Madagasikara ny anarana maha tompondaka eran-tany (junior) sy ny maha tompondaka lefitra ny vehivavy, azo tany Kaihua, Sina, tamin’ity taona 2017, ity. Ankoatra izay, hanao tatitra any amin’ny komisiona ny fitsipi-pifehezana, mangataka hanasaziana ny filohan’ny federasiona malagasy sy ny filohan’ny delegasiona, nitondra ny ekipa tany Sina, sy ny tale teknika nasionaly ny tenany. Tsy manakana ireo sazy hafa ihany koa anefa izany, araka ny fanambarany.
Notsiahivin’ity filohan’ny federasiona iraisam-pirenena ity fa tsy nanaja ny fepetra tokony harahina, amin’ny fandraisana anjara amin’ny fifaninanana, ny delegasiona malagasy, toy ny fanefana ny fivahiniana.